Maka dhici doontaa Ethiopia Doorasho Qof iyo Cod ah? | Ogaden24
Maka dhici doontaa Ethiopia Doorasho Qof iyo Cod ah?
Nov 26, 2019 - Aragtiyood
Marka laga tago mala awaalka aynu nafteena ugu sheekayno ee ah ethiopia way ku qasbantahay inay doorasho cadaalad ah qabato, Marka aad eegto saansaanta iyo geedi socodka siyaasada Ethiopia waxaa kuu soo baxaysa in aysan dhici doonin doorasho qof iyo cod ah ama cadaalad ah.
Waa run oo Ethiopia way ku qasbantahay inay doorasho xalaal ahi ka dhacdo dawlada federalka ah lkn kuma qasbana doorasho cadaalad ah inay ka dhacdo dawlad deegaanada (regional states) hadaba sida aan wada ogsoonahay abiye waxuu xalkeeda galay sidii Ethiopia doorasho aan wadanku ku kala jabin ay u gali lahayd wana mida hada loo dhisayo xisbiga cusub ee EPP.
Marka taas laga tago xisbiga EPP waxa uu xidhiidh la yeeshay kali ah xisbiyada talada deegaanada haya hada sida SDP lkn tashi iyo bandhig ma uusan u samaynin xisbiyada aqlabiyada shacabka haysta ee ONLF iyo OLF taas macnaheedu ma waxaa weeye loomabaahna xisbiyada talada deegaanka ay u badantahay inuu qabto? Waa maya lkn waxa jira plan B u yaala ethiopia oo ah inaysan sooba bixin ugu horaynba. Taasi waxay ku tusaysaa in dib uun loo soo celin doono xisbigan SDP madama uu yahay midka lagu guuri karo waqti xaadirkan halka cabsida kali ah ee uu abiye qabo ay tahay in SDP laftiisu diido kamid noqoshada xisbiga cusub walow ay jiraan balan qaadyo badan (wasiro iyo guddi fulin oo tiro badan).
ONLF ma u diyaar garawday doorasho qof iyo cod ah? Marka laga tago wafuud iyo abaabul badan oo la sameeyay lkn malaga war hayaa qaabka iyo cida codayn karta? Yaa masuul ka ah qabashada cododka? Yase tirin doona cododka? Hadiiba is daba marin dhacdo maxa uga qorshaysan?